कोरोना सर्छ कि भनेर चिन्तित हुनु जरुरी छैन, यी ३ तथ्य आत्मसात गरौँ : डा पाण्डे - Dainik Online Dainik Online
प्रकाशित मिति : ६ कार्तिक २०७७, बिहिबार १२ : ३४
जनस्वास्थ्यविद् डा रवीन्द्र पाण्डेले कोरोना भाइरस सर्छ कि भनेर चिन्तित हुन जरुरी नभएको जनाएका छन् ।
चिन्ताले भाइरस नसर्ने नभएको भन्दै उनले स्वास्थय सावधानी अपनाउ आग्रह गरेका छन् ।
सामाजिक सञ्जाल मार्फत डा समिरले चिन्ताको साटो बरु आफूलाई बलियो बनाउने उपायमा लाग्न आग्रह गरेका छन् ।
डा. रवीन्द्र पाण्डेले फेसबुकमार्फत दिएका सुझाव यस्ता छन्
नेपालमा एक हजार संक्रमितमध्ये जम्मा ६ जनाको मृत्यु भएको छ। मृत्यु हुने अधिकांश व्यक्तिसँग विविध स्वास्थ्य समस्या हुन्छन्।
उपचारले उकेरा लगाएको जीवनलाई कोरोना भाइरसले फुकेर ढालेजस्तै हो। हामी कोरोना भाइरससँग डराएका होइनौं। मृत्यु तथा रोगसँग डराएका हौं। रोग निको हुन्छ, मृत्यु शाश्वत छ।
३. कोरोना संक्रमणरकोभिड निको भएपछि खानपिन, शारीरिक अभ्यास र आत्मबल वृद्धि गर्ने हो। पत्रपत्रिका, इन्टरनेट, टेलिभिजन, सामाजिक सञ्जाल तथा असामाजिक सञ्जालमा दुर्लभ केसलाई लिएर पस्किएका डरलाग्दा कुराको विश्वास गर्नुहुँदैन।
संसारमा लाखौं वैज्ञानिक र विज्ञ छन्। उनीहरूले कोभिड लागेपछि कुन कुन अंगमा के असर गर्दोरहेछ भनेर अध्ययन गरेका हुन्छन्। जुन परिणाम प्राप्तिका लागि अनुसन्धान गरेका हुन्छन् , त्यस्तै रिपोर्ट निकाल्छन्।
जुनसुकै रोग पनि निको भएपछि केहि हप्ता कमजोरी अनुभव हुन्छ।
पौष्टिक खाना, शारीरिक सक्रियता, उच्च मनोबल, सकारात्मक सोच तथा आफ्नो कामको व्यस्तताले ती पार्श्व प्रभाव हराउँदै जान्छन्। कुनै समस्या देखियो भने पनि त्यसको उपचार हुन्छ। उपचार गरे निको हुन्छ।
सूचना र समाचारको हाइ डोज नै तनावको प्रमुख स्रोत हो। हाम्रो ननकोभिड जीवन निकै सुन्दर छ। त्यो सुन्दर जीवन बाँच्ने अभ्यास गर्‍याैँ भने हामी स्वस्थ र निरोगी हुन्छौं। त्यसैले आउँदै नआएको समस्याका लागि फेक चिन्ता नगरौं। हुँदै नभएको कुराको डर नमानौं ।